Santi Asoke - WRSP
1934 (June 5): Mongkol "Rak" Rakpong mụrụ Samana Photirak na mpaghara Ubon Ratchathani na Northeast Thailand.
N'afọ 1970: etinyere Rakpong na ngalaba nke Thammayutnikai.
1975: Otu Asoke ghọrọ otu nọọrọ onwe ya.
1988: E jidere ndị otu Asoke ma bo ha ebubo na ha bụ ndị jụrụ okwukwe
1989-1996: E nwere ikpe ụlọ ikpe na-aga n'ihu megide ndị mọnk Asoke na ndị nọn.
1996: ndị mọnk Asoke natara ikpe a kwụsịtụrụ maka afọ abụọ; a tọhapụrụ ndị nọn
2000: Otu Asoke kwadoro Prime Minister Thaksin Shinawatra.
2000: E guzobere usoro ọmụmụ ọzụzụ na ịkọ ugbo na Buddhist na obodo Asoke.
2005: Prime Minista Thaksin Shinawatra gara obodo Sisa Asoke.
2006: Otu Asoke sonyere na ngosipụta megide Thaksin Shinawatra.
2008: Otu Asoke sonyere na ọrụ nke ọdụ ụgbọ elu Bangkok.
2011: Ndi otu Asoke mere "Neo-Protest."
Santi Asoke bụ otu arụmụka Buddhist na-arụ ụka na Bangkok nke e guzobere na mmalite afọ ndị 1970 site n'aka Mongkol "Rak 'Rakpong," [Foto dị n'aka nri] bụ onye na-ede egwú na-ewu ewu na onye mara mma nke ọma. A mụrụ ya Samana Photirak na June 5, 1934 na Ubon Ratchathani n'ógbè dị na Northwest Thailand na ezinụlọ Sino-Thai. Nna ya nwụrụ mgbe ọ dị obere, mama ya gbalịkwara ịkwado Rakpong na ụmụnne ya. A na-efe nne na ebe ndị a na-akpọ Asoke, karịsịa na Ratchathani Asoke na Ubon Ratchathani, nke a na-eji eserese na eserese nke nne na-ese ya. Ndị na-eto eto, ndị na-eto eto, ndị na-eto eto mara mma, na-achọghachikwa na mgbidi nke ụlọ dị iche iche na obodo Ratchathani Asoke.
A na-ahụzi akụkọ ndụ Rak Rakpong n'ụzọ doro anya na ọkọlọtọ Buddhist dị nsọ, nke nwa okorobịa na-aga nke ọma / isi na-atụgharị iri atọ na-abanye n'ime nsogbu ndụ na-ajụ ihe ndụ okomoko ya na-ezigara na-esote na njem ime mmụọ na-achọ ihe ngwọta nye ya ịdị adị ọchịchọ. Dị nnọọ ka onye malitere Buddha, Siddharta Gautama, ọ were ọtụtụ afọ Rak Rakpong ka a mata ya dịka ezigbo onye nkụzi ime mmụọ.
Nke mbụ, ọ kwụsịrị iri anụ, nke na omenala Buddha Thai nke Theravada na-ewere dị ka mmezigharị na Onyenwe anyị Buddha n'onwe ya adịghị eme. Nke a anọgidere na-abụ otu n'ime esemokwu kachasị na ụdị okpukpe Buddha, nke na-ekwusi ike na onye anaghị eri nri ma ọ bụ onye na-eme ihe ike bụ Rak Rakpong na-eme ntụgharị uche, na-eji ejiji na uwe elu ma gbalịa ime ka ndị enyi ya na ndị enyi ya ghọọ ndị anaghị eri anụ .
Dika akuko nke onwe ya, emesiri ya dika ndi amuma dika nka bu nani uzo puru isi nweta ikike dika onye Buddhist (Sanitsuda 1988). A họpụtara ya na sekit Thammayutnikai na 1970, ma ọ hapụrụ Thammayutnikai ma gbanwee ya afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị na òtù Mahanikai. "Otu òtù" abụọ ahụ (nikai) a maara na Buddha nke Thai nwere ike iji nlezianya na-emeso ya dị ka "òtù." Thammayutnikai bụ otu ìgwè "ndị mgbanwe" nke ndị mọnk nke Eze Mongkut (Rama IV) guzobere mgbe a họpụtara ya dịka onye mọnk. E kwuru na Thammayutnikai guzobere site n'aka onyeisi / mọnk iji gbanwee okpukpe Buddha Siamese iji wepụ ya na ndị na-abụghị Buddha ma ọ bụ ndị na-abụghị nke normative dị ka nkwenkwe ụgha na ọrụ anwansi. N'ikpeazụ, mgbanwe ya mesiri ụzọ ndị mọnk Buddha kwesịrị ejiji, na-eje ije, na-akpa àgwà ma na-agụ ihe odide Pali. Mgbanwe ndị a ekwughị mkpa ọ dị nghọta ziri ezi nke ozizi Buddha bụ isi ma ọ bụ ihe nkuzi, dịka Ụzọ Nkwa Noble na Buddhist Precepts (sila).
Rak Rakpong, nke a maara ugbu a dị ka Phra Bodhiraksa, enweghị afọ ojuju na nkuzi Buddha nke ndị Thai na omume nke ndị mọnk Mahanikai, ọ na-ekwupụtakwa ha n'ihu ọha maka ọdịdị nri ha na-eri nri, omume ndị anwansi na ịzụ ahịa. Ihe omuma nke ndi Buddhist sangha abughi Thai. Ọgba aghara kachasị mma nke omume ndị mọnk Buddhist (vinaya) na-aṅụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya, ịgba chaa chaa, na-esi ísì ụtọ maka ego, itinye aka n'ememe nwoke na nwanyị ma ọ bụ nwoke idina ụdị onwe, ile ihe nkiri na ịme ntụrụndụ ndị ọzọ.
Bodhiraksa adọtala ọtụtụ ndị na-eso ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi mgbe ha bi na Wat Asokaram na Samut Prakarn. N'ime ndị na-eso ụzọ a bụ ụmụ nwanyị, otu n'ime ha bụ ọdịnihu Sikkhamat Thipdevi. Otu a nke ndi na-eso Bodhiraksa hapuru ulo nzuko Wat Asokaram, ya mere eji mara ha dika ndi Asoke (chao Asoke). Asotù Asoke nke mbụ kwusiri ike karịsịa ụdị ndụ Buddha nke enweghị ebe obibi ma na-eme omenala ndị mọnk ọhịa na-ekwu, karịsịa na Central Thailand. N'ime afọ ole na ole, e nyewo ndị ahụ ala n'ala dị iche iche. Obodo mbụ nke Buddhist Asoke guzobere na Nakhon Pathom Province ma kpọọ Daen Asoke. Okpukpe Buddhist ọhụrụ ahụ dọtara ma mụbaa na-eso ọ bụghị nanị n'etiti ndị Bangkokian na ndị Sino-Thais gụrụ akwụkwọ ndị mepere emepe kamakwa n'etiti ndị na-agụghị akwụkwọ na Norwegian. Ọtụtụ ndị mọnk na ndị ọcha na-acha ọchamae chi) sonyeere ndị òtù Ahịa.
Omume a nke ịtọ ntọala dị iche iche, na-akatọ isi iyi maka omume rụrụ arụ, ịme nri onye anaghị eri anụ, ọ bụghị ịcha ntutu isi ha, ma yikwasị uwe mwụda na-eme ka ndị ọchịchị sanghasị mkpesa. Na August 6, 1975, Bodhiraksa kwupụtara atụmatụ ya ka ọ ghara ido onwe ya n'okpuru ikike nke Council of the elders (mahatherasamakom). O guzobere otu onwe ya; na ndị mọnk niile na ndị nọn kwadoro tupu August 6, 1975 ka edebanye aha ọzọ, ma nyefee kaadị ọhụrụ ndị mọnk. Bodhiraksa kwadebere ndị mọnk na ndị nọn onwe ya, ọ bụ ezie na a na-achọkarị na nwoke kwesịrị ịbụ onye mọnk ruo afọ iri tupu ya enwee ike ikpezi ndị ọzọ. A na-emezi nsogbu a na iwu ndị mọnk megide ya.
Bodhiraksa eweghachila onye isi ya asambodo ya mgbe ọ hapụrụ Thammayutnikai, mana o nyefeghị asambodo ya mgbe ọ hapụsịrị Mahanikai wee hiwe otu nke ya.
Mgbe Daen Asoke, e nyere mpaghara Asoke ala ọzọ, oge a na mpụga Bangkok na Bungkum. Onye nwe ya nke mpempe ala, ala ahịhịa ala nke ala ọma jijiji, mara Khun Santi, ya mere a na-akpọ obodo ọhụrụ ahụ Santi Asoke. Ebe ndị a na-akpọ Asoke n'oge ochie nwere nnukwu ogige osisi (kuti ) n'ihi na ndi mọnk na ndi inyom choro ndi okenye (sikkhamat) [Image na nri]. Na ụlọ, ebe ndị mọnk, ndị nọn na ndị nkịtị na-agbakọta iji gee ntị n'ozi ọma ahụ na iri nri ha, bụ ihe nkedo na-adị mfe n'elu ikpo okwu nke nwere akwa akwa ma ọ bụ tin.
Bodhiraksa nọgidere na-akụzi ya, iwu ndị na-achịkwa òtù ndị òtù Asokebe ka e kere n'oge ndị a. Ndị mọnk na ndị nọn na-eyi uwe mwụda uwe, na-emegide uwe mwụda na-acha ọcha nke ndị isi obodo sangha. E nwere ndị ọzọ dị na Thailand na-eyi uwe nchara nchara; ọtụtụ ndị mọnk a na-ewere dịka "ndị mọnk ọhịa." Somboom Suksamram na-edepụta ndị mọnk Thai na akụkọ ntolite mbụ dị ka araññavasin (ndị mọnk ọhịa) na gramavasin (ndị mọnk obodo). Enweghị ndị mọnk nọ n'Ebe Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, ndị nwere ike bụrụ ndị a ma ama dịka ndị mọnk na-achọ ịchọta na oge Buddhist oge na-enweghị ebe obibi. Ndi isi ochichi obodo ndi Buddha nile nke Theravada mere ka o buru iwu ka ndi mọnk nile debanye aha na otu ulo ozo, ebe ha choro ma obu choro ka ha jiri oge mmiri ozuzo (varsa).
Umu ndi agha gbakwunyere ebe di n'etiti ndi ndu ndi oke ohia na ndi otu obodo. Uwe na-acha odo odo jikọtara ha na ọdịnala nke ndị mọnk ọhịa, ebe ndị agha Asoke nke obodo ukwu malitere n'isi ụtụtụ itinye uche n'ihe ọmụmụ Buddha na karịsịa ọmụmụ banyere akwụkwọ Buddha, Tripitaka.
Santi Asoke ghọrọ ebe ndi Buddhist bu ebe Bodhiraksa na akogharia okwute Pali dika nkwenye nke ya. Nke a mere ka ndị na-abawanye ụba n'etiti ụlọ ọrụ kachasị elu, bụ ndị boro Bodhiraksa ụta maka nghọtahie na ịkọhiere akụkụ Akwụkwọ Nsọ dị iche iche n'ihi na ọ naghị enwe ọmụmụ omenala nke Pali. Bodhiraksa ka na-akuzi ihe ngosi nke ogwu, ma kwuputa na o "adighi nma" (mai keng) na Pali. Otú o sina dị, ọ dịtụghị nkọwa ndị ọkà mmụta banyere okwute Pali, ma o yiri ka ọ mewo ka ozizi ndị Buddha ghọtakwuo ọtụtụ ndị mmadụ, nke a gbakwara. Ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na-eto eto na-eto Bodhiraksa maka "ikwu okwu n'ụzọ ziri ezi ruo n'ókè" (phuut trong).
Akpadoro ihe omuma nke nghota Buddhist Asoke ka enwere ike weputara ha n'ime afo ndi a: ndụ dị mfe n'ụdị ịga ụkwụ ọtọ [Image nri], ndị nkịtị yi uwe ndị ojii, na-eri naanị otu nri kwa ụbọchị, na-ehi ụra n'elu ala, ma na-etinye ike ọrụ mmadụ n'ụlọ nsọ karịa inye onyinye dị ka ọ na-eme na Thai Okpukpe Buddha.
Asoke sitere na mmalite mmalite mgbochi obodo na onye ike-ike. Ọ bụ mgbochi obodo, dịka otu a na-emegide nguzobe, ma ọ bụ n'oge "a machibidoro iwu" site na ndị isi Buddhist steeti. Ọ bụ ihe na-emegide ọchịchị na nkatọ ya siri ike banyere nrụrụ aka nke omume sangha, ọ bụkwa onye na-emegide ọchịchị ike na nlelị nke ego na akụnụba. N'ime oge akụ na ụba akụ na ụba nke Thailand na 1980s na 1990s, mgbe a na-atụ anya na Thailand ga-abụ NIC ọzọ (Mba Ọhụrụ Emepere) na "akụ na ụba agụ," okwu ndị Asoke bụ "amaja ịda ogbenye."
Ihe dị mkpa maka ụlọ nsọ Asoke bụkwa ihe enweghị ihe oyiyi Buddha; e nweghị foto Buddha na ụlọ bụ ndị ndị kwesịrị ntụkwasị obi nwere ike ịda n'ala n'ihu ya. Ajuju a na-ejighi ihe ijuanya mee ihe dị ka ebubo n'oge ikpe ahụ malitere na 1989 site n'ikwu na òtù Asoke abụghị Buddha. Ihe ịrịba ama mbụ nke ndị na-agbaso ndị Asoke ọhụrụ na-anọgide na-abụ na ha na-ewepụ ihe ndị Buddha ha. Ha na-eji obi ụtọ ma na-eyi ha n'oge nleta mbụ ha na ogige Asoke dị ka ngosi doro anya na ha echeworị onwe ha dịka ndị ọkà Buddha siri ike.
Ndi otu ndi otu a bu ndi ochichi ebe o bu mmalite na nguzogide ndi isi ochichi obodo [Image on right]. N'ime afọ ọgba aghara nke nwa akwụkwọ ahụ na-agbagha site na 1973 ruo 1976, ndị mọnk Asoke na-ama ụlọikwuukarị n'ogige mahadum, ikwusa Buddha na ịhazi ihe ngosi. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ mahadum na-eto eto sonyeere otu n'ime afọ ndị ahụ. E mesịrị họpụta ụfọdụ n'ime ha dị ka ndị mọnk ma ọ bụ ndị nọn; ụfọdụ n'ime ha nọgidere dị ka ndị na-eso ụzọ.
Bodhiraksa gbalịrị ijikọta ụfọdụ ndị mọnk a ma ama na steva steeti, dị ka Buddhadasa Bhikkhu na Panyananda Bhikkhu. Bodhiraksa na ndị òtù Asoke kwupụtawo mmasị dị ukwuu maka nkuzi nke Buddhadasa Bhikkhu ma gaa Suan Mokkh ka ha kwụọ nsọpụrụ Buddhadasa Bhikkhu. Ha na-enwe mmasị na mkpesa ya banyere ikpere arụsị. Ha nabatara nkọwa ya nke ihe ọmụma dịka ihe a ga-enweta na ndụ a kama ịnwụ. Ha na-akwa ụta na Buddhadasa abụghị onye anaghị eri anụ ma ghara ime ihe ọ kwusara.
Ìgwè ndị òtù ahụ guzobere ọtụtụ magazin, bụ nke ha bipụtara ma jiri aka ha. Ọtụtụ n'ime ebe ndị ahụ enweghị ọkụ eletrik na mmalite afọ iji mesie ike mkpa nke "ndụ dị mfe."
Nkatọ na-abawanye ụba na okwu nduhie megide Bodhiraksa na ozizi ya ruru ọnụ ọgụgụ ya elu na 1989 mgbe ya na ìgwè ndị mọnk niile na sikkhamats ejidere ya maka obere oge (Heikkilä-Horn 1996).
Okpukpe Buddha Asoke na-ekwusi ike na eziokwu anọ nke eziokwu dị ka isi nkuku nke ozizi Buddha. A na - agba ume Buddhist Asoke ka ọ kọwaa ahụhụ onwe ya (dukkha) site na ụkpụrụ nke eziokwu anọ nke eziokwu. N'ihe dị irè, nke a pụtara na, na Asoke, ndị mmadụ ga-enyocha n'ime onwe ha maka mmalite nke nhụjuanya onwe ha (samudya) site n'ịtụgharị uche n'àgwà nke onwe ha kama ịtụkwasị ụta n'òtù ndị ọzọ. N'ihi ozizi ndị a niile, a na-ewere ihe niile gbasara ofufe Chineke na ihe ndị metụtara okpukpe na-abaghị uru na ọbụna nzuzu dị ka nhụjuanya onwe onye anaghị esi n'aka ndị agha na-apụ apụ dị ka mmụọ ndị mmụọ ọjọọ (phi) ma ọ bụ ghosts kama site na omume nke mmadụ onwe ha.
Eziokwu nke abụọ dị oke mma na-egosi nhụjuanya ụmụ mmadụ na-enwe mgbe ọ bụla na-achọsi ike na anyaukwu, nke a na-azaghachi n'òtù ndị òtù nzuzo na-ejide onwe ha n'ụzọ zuru ezu ma na-emegide ihe onwunwe. Ebumnuche nke nzaghachi a bụ ogologo oge nke mmadụ na-ebelata agụụ maka ntakịrị ihe oriri, ihe onwunwe ọhụrụ na ihe ụtọ anụ ahụ. Mgbe a na-egosi ịda ogbenye dịka ezigbo, nhụjuanya nke agụụ na-agụ na-adị mfe belata na nke kacha nta. Eziokwu nke kachasi elu na-akụzi na e nwere ụzọ si na nhụjuanya a (nirodha), onye ọ bụla nke chọrọ ịchọta ụzọ a site na nhụjuanya kwesịrị iji nlezianya nyochaa eziokwu anọ dị oke mma nke na-ewepụta ụzọ si na nhụjuanya (magga). Eziokwu nke anọ dị oke mkpa na-akọwawanye echiche nke ibelata nhụjuanya site na ịmepe Ụzọ Ụzọ Nri Atọ.
Ụzọ ezi uche dị iche iche (nke gụnyere nghọta ziri ezi, echiche ziri ezi, okwu ziri ezi, omume ziri ezi, ikike ndụ ziri ezi, mgbalị ziri ezi, ezi uche ziri ezi) ziri ezi dị ka ụzọ dị mkpa na ụzọ isi na-agbaso iji belata nhụjuanya nke mmadụ. Nzọụkwụ mbụ na ụzọ a bụ "nghọta ziri ezi" (samma ditthi). N'iji nghọta ziri ezi ihe odide Buddha na-egosi na a ghaghị ịghọta ihe kpatara nsogbu. Ihe kpatara nsogbu nke nhụjuanya ụmụ mmadụ, dị ka Buddha, sitere na onye ọ bụla na-achọsi ike. Dika nghọta bu nzo ukwu nke uzo di n'okporo uzo nke Nobleight, ekwuru na madu aghagh ighota uzo nke ato bu eziokwu. Ọ bụrụ na onye ahụ ka na-eche na nsogbu ya niile na "nsogbu ọjọọ" sitere n'aka ndị agha mpụga, ọ pụghị ịgbaso Ụzọ Nzuzo Na-ahụ Maka Izu Ụzọ n'ụzọ ziri ezi na n'ụzọ ziri ezi ma mana ka ọ ga-eme ka ọ kpafuo na nkwụsị mbụ. Umu ndi otu a na-ekwusi ike nghọta ziri ezi, otutu ndi na akwado ndi mmadu na-ekwusi ike na mmadu kwesiri ihu uwa dika o di, n'enweghi nduhie (moha). "Ezi nghọta" na-ezo aka na nghọta nke karma, dana, ememe na ụzọ isi ghọọ onye arahan.
Nzọụkwụ nke abụọ n'okporo Ụzọ Nkwa Noble bụ "echiche ziri ezi" ma ọ bụ bụrụ nke a sụgharịrị ịbụ "ezi uche" (samma sankappa). Nke a na Asoke na nkọwa Buddhist sara mbara ka a na-asụgharịkarị dị ka onye nwere "ebumnuche ziri ezi." Inwe "ebumnuche ziri ezi" dị ka nke a dị mma, ọbụlagodi na nsonaazụ ya adịghị mma. N'ihi ya, echiche nke "ezi ebumnuche" bụ ugboro ugboro na gburugburu Asoke. Onye nwere ezi ebumnuche bụ "ezigbo mmadụ" ọbụlagodi na nsonaazụ nke omume ya nwere ike ịkpata ihe na-adịghị mma ma na-emebi. Nsụgharị ọzọ maka nzọụkwụ nke abụọ bụ "echiche ziri ezi," nke pụtara na mmadụ ekwesịghị ịnabata nghọtahie na nkọwahie ọ bụla n'uche ya kama zụlite "echiche ziri ezi" banyere otu ọnọdụ. N’ebe a, a na-ekwukarị okwu ndị Buda a ma ama na “ụzọ etiti”. Echiche nke "ụzọ dị n'etiti" na-enyekarị usoro na-abụghị nke itinye aka na-eme ihe ọ bụla a na-ahụ dị ka "ụzọ dị n'etiti." Enwere ụzọ dị oke njọ karịa ihe ọ bụla. Na nkọwa Asoke, otu oke oke bụ ndụ na ịzụ ahịa dị oke ọnụ; akụkụ nke ọzọ ga-abụ imekpa uche mmadụ obi, dịka ọmụmaatụ, site n'ịnọ naanị ya n'ọgba. "Middlezọ dị n'etiti" pụtara ịbụ onye otu otu ebe mmadụ nwere ike ịnwale omume Buddha ya kwa ụbọchị mgbe ọ zutere ndị ọzọ na ụwa nke ịhụ ihe onwunwe n'anya.
Nzọụkwụ nke atọ na Ụzọ Nkwa Noble bụ "okwu ziri ezi" (samma vaca). Na omenala Asoke a na-atụgharịkarị ka ọ bụghị ụgha na ịkwa isi. N'okwu Buddhist nke Asoke, a na-enwekwa ekele dị ukwuu. A na-elekarị anya nkwusa Bodhiraksa dịka "na-ekwu eziokwu." N'ihi ya, ọ ghọla nzọụkwụ na ụzọ Nobel nke asatọ iji kwuo eziokwu ahụ, na-akatọ ya n'ihu mgbe ọ dị ihe a ga - akatọ na ịghara izere eziokwu ahụ n'ihi ụda nkwekọrịta.
Isi nke anọ nke Ụzọ Nzuzo Na-adịghị Eke bụ ihe kwesịrị ekwesị (samma kammanta), mgbe ụfọdụ a sụgharịrị dị ka "omume ziri ezi" ma ọ bụ "omume ziri ezi." Nke a ziri ezi dabeere na nghọta ziri ezi na okwu ziri ezi. N'ihi ya, mmadụ apụghị ịmalite site na nkwụsị ụkwụ ka ọ bụrụ na mmadụ apụghị inwe "ihe ziri ezi" dabere na nghọta na-ezighi ezi na ezighi ezi. Nzọụkwụ ọ bụla n'okporo ụzọ dị elu bụ otu ihe dị mkpa, na nghọtahie nke mbụ ma ọ bụ nke abụọ ga-eduga na nghọtahie nke ozizi ndị ọzọ. Nghọtahie nke eziokwu ndị bụ isi nwere ike ime ka ọ bụrụ ihe ọjọọ. Ihe ndị na-emekọrịta ihe na Buddha bụ ndị ndị Asoke jụrụ kpamkpam. Ịkwanye ala, ịfesa mmiri dị nsọ na ndị Buddha ma ọ bụ itinye aka na omenala ndị ọzọ a na-asụ n'ógbè ahụ dịka enweghị oge na ego maka ndị Asoke.
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ma na-arụ ụka nke Ụzọ Nkwa Noble bụ "ezigbo ego" ma ọ bụ "ọrụ kwesịrị ekwesị" (samma ajiva). Ihe odide Buddhist na-edepụta ọrụ ndị na-adịghị akwadoro maka ime Buddhist. Ihe ndị a na-apụghị ime bụ, dịka ọmụmaatụ, ọrụ ọ bụla nke na-akpata ọbara. Nke a ga-agụnye ma ndị agha ma ndị na-azụ anụ na ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ ebe ihe ize ndụ nke iji ihe ike eme ihe dị nso. Ịzụlite ehi nwere ike ịbụ nsogbu dịka a na-akpọlite ​​ehi ka e gbuo ya n'oge oge. Ọ bụghị onye Buddha na-akpọ mmanya na-aba n'anya; nke pụtara na ụlọ mmanya niile na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ekwesịghị ịgba ọsọ site na-eme Buddha. A nabataghị ndị ohu na ndị inyom na-azụ ahịa na Buddha, ma n'ụzọ doro anya, Thailand dị mma maka ụlọ ọrụ ịgba akwụna na dịka ebe etiti nke ịzụ ahịa ndị mmadụ si n'obodo ime obodo nakwa site ná mba ndị gbara ha gburugburu.
Maka ndi otu Asoke, nkwenye nke "oru ziri ezi" bu ihe doro anya ma di mfe. A machibidoro ịṅụ mmanya na-aba n'anya, ma dị ka ndị anaghị eri anụ, ha anaghị eso anụmanụ na-egbu egbu na anụmanụ egbu egbu. Okpukpe Buddhism nwere nsogbu dị ukwuu n'ịkọwa isi ihe ndị a dị ka ọ dị ka ọ na-adịghị njọ site na echiche nke akụnụba Thai ugbu a, nke dabere na ụlọ ọrụ ndị njem na na mbupụ ọkụkọ, azụ na ihe ọkụkụ na-ere ahịa n'ụwa. Isi nke ise n'Ọzọ Nri Noble nwere ike ịbụ ebe kachasị anya maka ndị na-azụ Asoke na obodo obodo na obodo nta. Obodo ezumike na-enye ndị na-enye ndị mmadụ ụzọ dị mma iji soro ozizi ndị a (Essen 2005).
Isi nke isii bụ "mgbalị ziri ezi" ma ọ bụ "ezi mbọ" (samma vayama), nke bụ obere nkịtị. Ọ na-agba ndị na-arụ ọrụ ume ka ha zere ihe ọjọọ ma jụ ụgha. Ọ na-agbakwa ndị na-arụ ọrụ ume ka ha "mara onwe gị" ma na-eme omume dabere na ikike na ikike onye ahụ n'otu n'otu na inwe ọganihu na oke nke ha. A na-eme nke a na otu Asoke n'echiche na onye ọ bụla na-agbaso ụzọ dị iche iche nke omume. Somefọdụ na-eri otu nri n’ụbọchị, ụfọdụ na-eri nri ugboro abụọ n’ụbọchị, ụfọdụ na-erikwa nri ugboro atọ n’ụbọchị. Fọdụ ndị na-eme Asoke hapụrụ ihe onwunwe ha wee banye n'ụlọ nsọ ka a họpụta ha ma ọ bụ nọrọ dị ka ndị bi n'ụlọ nsọ. Ndị ọzọ na-ebi n'èzí ụlọ nsọ na ezinụlọ ha, na-aga ọrụ, ma na-etinye naanị oge ha n'efu na ọrụ Asoke. Ndị Asoke dị n'echiche a bụ ndị na-ezighi ezi dịka ndị na-eso Asoke nọ n'ọkwa dị iche iche n'ihi nrụgide nke omume ha. Nke a na otu ndị Asoke na-atụgharị ya dị ka ihe ime mmụọ na nkedo (varna) dabere na omume onye.
Uzo abuo nke uzo di n'okporo uzo iri ato bu ejikorita obi udo na uche iche. Nzọụkwụ nke asaa (samma sati) ka a sụgharịrị n'asụsụ Bekee dịka "ezi uche" ma ọ bụ "ezi uche." Nzọụkwụ nke asatọ (Samma Samadhi) mgbe ụfọdụ, a na-sụgharịrị ya n'ụzọ mgbagwoju anya dị ka "ezi uche na-atụgharị uche" ma ọ bụ "nchebe ziri ezi." Nzọụkwụ nke asatọ na-atụgharịkarị dị ka ntụgharị uche ziri ezi, ya mere nkọwa a na-agba ume ịtụgharị uche. Ma, ajụjụ a ka na-anọgide ma onye nwere ike ịtụgharị uche ma ọ bụrụ na otu agbasoghị nzọụkwụ asaa gara aga n'okporo ụzọ Nri asatọ. Ọzọkwa, olee uru ịtụgharị uche ma ọ bụrụ na e leghaara ụzọ ndị mbụ anya? Onye na - agabiga ọrụ ọ bụla nwere ike ịnọdụ ala ma mee ka obi ya dị jụụ ka ọ bụrụ "uche ziri ezi?" Òtù Asoke na - ekwusi ike na -izu ụka), ọtụtụ ndị na-akwadochite Asoke na-ekwupụtakwa na nzube ha bụ ịmalite "teta, anya, na ịma" gburugburu ebe obibi na gburugburu ebe obibi ha. Nke a na-akọwa "ụwa a" nke ndị òtù Asoke. A na-atụ anya ka onye uweojii na-agbaso akụkọ, ihe omume ụwa, ọdachi gburugburu ebe obibi na mba ndị ọzọ na iji tụlee mmetụta nke ihe ndị a na ndụ ha na obodo Asoke. Otú ọ dị, ndị Dayke achọghị ka e weere ya agha (nke ụwa a) mana kama nhazi (ndị ọzọ). Ndị ọkachamara nwere mmasị na ihe omume ụwa, ma ha abụghị "ihe ọjọọ" ụwa; n'ihi ya, ha na-ele onwe ha anya ghara ịbụ l okiya. Ka o sina dị, onye Asoke ekwesịghị ịnọgide na-amaghị ihe nke ụwa. Buddha Asoke bụ Buddha na anya ya.
Ndị otu Asoke anaghị atụgharị uche n'echiche ọdịnala nke okwu ahụ. Ha na-ajụ echiche bụ na ịnọdụ ala n'otu ebe ma mechie anya maka nkeji iri abụọ kwa ụbọchị ga-esonye na nkuzi Buddhist bụ isi, dịka ịghọta ihe kpatara nhụjuanya. Ndị Asoke na-ekwusi ike na akụkụ nke "itinye uche," yabụ ntụgharị uche ha bụ itinye uche n'ihe ọ bụla ha na-eme ma ọ na-eri nri, na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-ehi ụra. A na-eme ihe ọ bụla site na iji nlezianya na-etinye uche, nke bụ ntụgharị uche ha.
E wezụga eziokwu anọ ahụ siri ike na Ezigbo Ụzọ Nri dị ka nkume nkuku nke omume nile nke Buddha, ụkpụrụ ndị ahụ (sila) kwusiri ike. A na-atụ anya ka ndị uweojii niile na-atụ anya ịgbaso Ụkpụrụ Ise. N'iburu n'uche na iwu ndị dị elu abụghị iwu site na ndị ọchịchị ime mmụọ dị elu, a ghaghị ịghọta iwu dị ka ndụmọdụ. Ndị chọrọ ịghọ Buddha ma bie ndụ ha dịka onye Buddha kwesịrị ịnwa ma soro ndụmọdụ ise dị mkpa. N'ụzọ dị otú a, nsụgharị kachasị mma maka ntụziaka ga-abụ na onye ahụ kwupụtara nkwa iji zere ime ihe ndị a. Iwu ise ahu abughi na ekwesighi ka ewere ya dika ihe ndi ozo.
Iwu nke mbụ na-emesi uru nke ndụ nile ike ma si otú ahụ na-atụ aro na onye Buddhist na-ezere ibibi ụdị ndụ ọ bụla. Nkwado ahụ gụnyere ma ụwa ma mmadụ. Ọ na-agụnye osisi ndị ahụ, ma dịka a na-ewere osisi dị iche iche na enwe ume ike (kandha) a naghị emeso ha otu ụdị nsọpụrụ dịka ụmụ mmadụ na anụmanụ.
Iwu nke mbu nwere njikọ chiri anya na nghọta Buddha nke "onwe." Onye nke onwe ya (agha) ka a na-ajụ na ozizi Buddha na-akwado ihe dị mgbagwoju anya ma ọ bụ nchịkọta nke onwe. Nchịkọta ise a ma ọ bụ ike nke onwe gị bụ ahụ ahụ (rupanama), mmetụta (vedana), mmata (samjña), echiche (samskara) na nsụhọ (vijñana). Mgbe a na-atụle osisi, ha nwere "ihe" na ọdịdị kama enwere mmetụta dị ala na "mmetụta," ọ bụghị ịkọ "echiche" ma ọ bụ "nghọta." Ike ise a bụ ihe ndabere nke ndụ niile, ha soro onye ọ bụla ọzọ n'usoro n'usoro. Ndụ niile dabeere na mmekọrịta dị n'etiti ihe ise a. Ike ise ndị a na-anọgide na-egosipụta ma na a mụrụ ha ma a mụrụ ha ọzọ n'ụdị ahụ ọzọ. Ndị a bụ ụkpụrụ nke impermanence (anicca); onye onwe ya adighi ike, ma ijidesi onwe ya ike dika isi ihe nhụjuanya nile.
N'ebe ndị Asoke, a na-eji iwu mbụ kpọrọ ihe. Agaghị ebibi ndụ, a gaghị eri anụ, ma ọ bụ anụmanụ egbu. A na-achụ ụmụ ahụhụ na ahụhụ ndị dị ka agwọ na ududo; anwụnta na-adapụsị nwayọ nwayọ ma ọ bụrụ na ha ekpebie ịnọdụ ala na ogwe aka. Ejiri nlezianya kpuchie ududo iji zere imebi ududo n'onwe ya. A naghị enye nwamba na nkịta aka n'ụlọ arụsị Asoke n'ihi na nke a ga-abụ nnyonye anya na ndụ ha. Zụ nkịta ma ọ bụ pusi bụ ime ka anụmanụ ahụ dabere na ụmụ mmadụ ma duga na ọ gaghị enwe ike ịlanarị n'onwe ya.
Mgbe aghotara ihe di nkpa nke iwu mbu, ma onye ahu enwee ikike zuru oke nke isoro iwu nke mbu, iwu ndi na adi nfe ga adi nfe karie. Iji ihe na-egbu egbu egbu bụ ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche na gburugburu Asoke. Standardkpụrụ omume na-ekwupụta na a na-eri nri tupu ehihie, ọ dịghịkwa onye Asoke na-ama ụra na ụlọ ntụrụndụ nke abalị. Ọnwụnwa nke ịghọ aghụghọ na ekwesịghị ntụkwasị obi nye onye ibe gị na-ebelatakwa mgbe mmadụ anaghị eleta ụlọ mmanya na ụlọ oriri na nkwari abalị. Jealousfọdụ ekworo na-ebili n'etiti ndị di na nwunye nọ n'obodo ndị dị na Asoke, ma a na-edozi ha n'ime obodo na obere ihe ngosi ọha. Ndụmọdụ ndụmọdụ ndị nọn na-enye n'ọnọdụ ndị a bụ ihu eziokwu ma kwuo hoo haa gbasara okwu a.
Iwere ihe na-abụghị nke gị ka na-eme na ogige Asoke, karịsịa n'etiti ụmụ akwụkwọ. Adịghị m anụ ka nsogbu ndị a na-etolite n'etiti ndị okenye. Otutu n'ime ihe ndi ozo n'ime ulo nzuko Asoke diri ulo ahu na ntọala ndi n'echebe ulo uku ha; Ọ ghọọ ihe onwunwe ọha mmadụ, nke onye ọ bụla nwere ike iji ma ọ bụghị ya n'otu n'otu dịka ihe onwunwe nkeonwe. Ihe e mesiri ike na ịhụ ihe onwunwe na ịme ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ na ndị òtù Asoke na-etinye aka na izu ohi n'etiti onwe ha ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ site na iwu na-akwadoghị ịbawanye ihe onwunwe ha. Ụdị uwe ejiji Buddha nke Asoke ma ọ bụ bunniyom (meritism) na-emegidekwa ọchịchị aka ike, ịzụ ahịa na anyaukwu. Ndị otu Asoke kwusiri ike na nrụrụ aka nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Thai kwesịrị ịbụ ndị akọwapụtara na echiche ụwa na-emegide isi obodo. Bebụ onye “emerụ emerụ” na ịbụ onye ohi.
Iwu nke anọ bụ iji zere ikwu okwu n'ụzọ na - emerụ ahụ ma ọ bụ gbasara ndị ọzọ. Ọ na-adaba na nzọụkwụ nke atọ na Okporo Ụzọ Noble Eightfold (samma vaca) ma gbaa ndị mmadụ ume ka ha na-ekwupụta eziokwu mgbe nile ma na-ekwu nkwanye ùgwù banyere ndị ọzọ.
Iwu ise nke ise bụ ndụmọdụ dị mkpa maka onye Buddha na-eme. Iwu ise na-esote na-enye usoro ndị ọzọ dị oke mkpa na-atụ aro ka ha ghara itinye aka na njedebe na ịhụ ihe onwunwe n'anya. Otutu n'ime ndi mmadu ndi Asoke na-agbaso iwu nke asatọ, nke bu na ha erighi ihe obula mgbe ehihie, ha na-ezere igwu egwu na ijiko na ndi ozo di iche iche, ha adighi-etinye mmanu ma obu ihe ndi ozo. Ihe ịrịba ama mbụ nke onye na-atụgharị azụ Asoke ọhụrụ bụ na onye ahụ na-eyipụ onwe ya niile ọla (Buddhist amulets, ọlaọcha ọlaedo na mgbaaka). Na usoro a nile nke ichota isi ihe, ochicho nke mmadu adighi adi, na n 'onu ogugu nke a ga-ebelata.
Iwu abụọ ndị fọdụrụ dị mkpa naanị maka ndị mọnk na ndị nọn na ìgwè ndị òtù. E kwesịghị iji ndị a họpụtara ahọpụta jiri oche ndị dị oké ọnụ ahịa, oche na akwa dị elu, ma a gaghị ekwe ka ha nwee ego. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na Thailand na ebe ndị ọzọ n'Eshia ka ha nọdụ n'ala, rie n'ala ma dina n'elu ala, ya mere iwu nke itoolu anaghị esiri ike ịgbaso omenala ọ bụla Asia.
Iwu nke iri gbasara ịghara iji ọlaedo na ọlaọcha (nke pụtara ego) eme ka ọ bụrụ ihe siri ike nyochaa n'oge a nke Thai. N'ọgbakọ ndị a, ọ bụ ọchịchị zuru oke, mana n'èzí Buddhist na-agbanyeghị ike. Ọ bụghị ihe ọhụrụ ịhụ ndị mọnk Buddha ndị Buddha na-akwụ maka igwe taxi ma ọ bụ na-akwụ ego maka usoro kọmputa ọhụrụ na ụlọ ahịa. Ndị mọnk na Thailand anaghị akwụ ụgwọ maka njem ụgbọ ala ma ọ bụ njem ụgbọ oloko, ma mmesapụ aka nke ụlọ ndị Thai ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka onwe ha adịghị agafe karịa nke ahụ. Na omume, onye mọnk kwesịrị inwe onye ya na ya ga-akwụ ụgwọ iji kwụọ ego ahụ achọrọ. A na-eme usoro a na Asoke ebe ndị mọnk na ndị nọn na-aga na ndị mmadụ. Ndị na-eso ya na-eso ha aga n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ndị na-ahọrọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ndị mọnk Asoke na ndị nọn nweta nlekọta ha chọrọ n'enweghị ego.
Iwu ise dị mkpa ma ọ bụ ọbụna ihe ndị ọzọ na-achọsi ike dị mfe ịgbaso maka onye bi n'ụlọ nsọ Asoke. Ha nwere ike na-achọkwu ndị na-eso Sundayke ndị bi n'èzí ụlọ nsọ ma soro ndị ọrụ ibe ha gaa mgbede ma ọ bụ na-ebi n'ụlọ ụlọ nke oge a na ihe niile nke nkasi obi na ọgaranya n'oge a.
Iwu ise ahụ jikọtara ya na omume ise dị mma nke onye ahụ kwesịrị ime maka imekwu ihe. Iwu mbu abughi nani na onye ahu na-ezere ibibi ndu, mana ekwesiri imesi ike, nke putara na mmadu kwesiri igbado ma kwado ndu. Enwere ike ime nke a n'ụzọ dị mfe, dị ka ọmụmaatụ, na obere ogige ebe onye ahụ nwere ike ibu osisi ma na-ebi ndụ kwekọrọ na okike. Dịka iwu nke abụọ, onye ahụ kwesịrị inye ihe, na-emesapụ aka ma jiri omume a mara na ị gaghị etinye aka na ihe onwunwe. Maka ntụzi nke atọ, Asoke kwadoro mmekọrịta nwanne nwoke na nwanne nwanyị n'etiti ndị genders. A na-emeso Asoke dịka otu ezinụlọ buru ibu na aha ezinụlọ ha na-ekerịta dị ka a tụlere na mbụ.
Ghara ikwu okwu ọjọọ banyere ndị ọzọ pụtara ikwu okwu ọma banyere ndị ọzọ ma nọgide bụrụ onye nwere nsọpụrụ mgbe niile. N'ezie, nke a bụ ụkpụrụ zuru oke maka omume ọma na obodo ọ bụla ma mesie ya ike na ọha mmadụ Thai. N'ebe a, ndị Asoke na-eme n'etiti onwe ha site n'iji nkwanye ugwu kelee ibe hawai ”'n'oge niile na ikele ibe gị na a mmiri mgbe, dịka ọmụmaatụ, na-ekere òkè nri ma na-anata kaadị nri site na onye ọzọ na akara.
A na-atụlekwa ozizi ndị Buddha ndị ọzọ na nke ọma na Asoke. Ihe omuma di iche iche nke enyere ndi mmadu Asoke ka ha nabata okwu ndi Buddhist Asoke na-enye ha nduzi ndi ozo n'ime ha na oganihu ha.
Ìgwè ndị agbachitere na-aga megide omenala ndị Buddha ndị Thai na-adịghị agafe agafe. Ndị mọnk na ndị nọn adịghị etinye aka na nzuzo- ememe animistic, na ịkọ ma ọ bụ ịkọ nọmba nọmba lotrị. Enweghi mmanu nke mmiri di mma ma o bu ihe ndi ozo site na ocha di ocha dika otutu n'ulo ndi Buddha nke Theravada. Ìgwè agbụrụ ahụ amalitewo ememe na ememme nke ya. Kwa ụtụtụ na 4 AM ndị mọnk na ndị nọn na-ekwusa ozi ọma n'ụlọ nsọ ndị dị na Asoke. N'ihe banyere 6 M ndị mọnk na ndị nọn na-apụ maka agbata obi ebere ha (pindapada) [Foto dị n'akụkụ aka nri] ma laghachi n'ihu 8 AM. Ndị Dayke na-eri otu nri ha tupu ehihie na-ezukọta na ụlọ nsọ (ụlọ) maka ikwusa ozi ọma banyere 9 AM. Na mgbede, enwere ike inwe mgbakọ na 6 PM ndị mọnk na ndị nọn na-elekọta.
E nwere ọtụtụ izu kwa izu ebe ihe dị ka puku mmadụ abụọ na-aga mgbe niile. Nzukọ ndị a na-agbakọta ụbọchị nsọ Buddha niile, dị ka ụbọchị ọnwa zuru ezu nke February, Eprel na Nọvemba. A na-amata nlọghachi ndị a Pluksek , Phutthaphisek na Mahapawarana otu. Pluksek na-ezo aka na-eteta, Phutthapisek si na Buddha abhiseka (ịsọpụrụ ihe oyiyi Buddha), mana ememe Asoke a na-emesi ozizi ike karịa ihe oyiyi ahụ. Mahapawarana mgbe oge udu mmiri ma ọ bụ Onye Buda Buda Lent na-ekpebi ebe ndị mọnk na ndị nọn ga-ebi ma họrọ abbata ọhụụ. Ha na-eme emume nke onwe ha na emume ncheta omumu Bodhiraksa na June na ezumike nke izu. Laghachi azụ na-eme n'obodo dị iche iche Asoke. Emume niile na-emesi ndụ Asoke ike nke na-agba ndị nkịtị ume ibi ndụ dị ka ụkpụrụ ndị mọnk dị na Asoke.
Bodhiraksa bụ onye ndụmọdụ ime mmụọ nke ìgwè ahụ, dịka ihe atụ na Nna Ukwu Ukwu nke a maara na otu dị ka Poh karịa , ma a na-emepụta ihe ndị dị mkpa site na ịmepụta abbots na abanye abanye na nke ọ bụla na Buddha.
Santi Asoke nwere ọtụtụ mpaghara ime obodo niile Thailand. Ihe kachasị mkpa bụ Pathom Asoke na Nakhon Pathom, Sima Asoke na Nakhon Ratchasima, Sali Asoke na Nakhon Sawan, Sisa Asoke na Sisaket na Ratchathani Asoke na Nakhon Ratchasima. E nwere obodo nta ndị dị ka Lanna Asoke na Chiang Mai; Phu Pa Fa na Chiang Rai na Hin Pa Fa na Chaiyaphum. N'ihe n 'ugbua, enwere ugbua iri ato na Asoke na Thailand.
Schoolslọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ebe obibi na ụlọ oriri na ọ group'sụ group'sụ nke otu a na-achịkwa ntọala ndị isi na-achịkwa. Enwere ọtụtụ ntọala ejikọtara na otu Asoke, ụfọdụ ndị kachasị mkpa bụ Dharma Army (gongthub dharm), nke na-elekọta ụgbọ ala, na òtù Dhamma na-agbasa (thammathat samakhom), nke na-ahụ maka mbipụta na nkesa akwụkwọ (Heikkilä-Horn 1996).
Otu a na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ụlọ akwụkwọ praịmarị na ụlọ akwụkwọ sekọndrị, obere ụlọ ọrụ ebe ha na-emepụta shampoos, ájá, nri na ọgwụ. Ha eguzobewo ọtụtụ ọgwụ mkpofu na ulo oru nyocha. Ha emeghewo ulo akwukwo ulo akwukwo ndi okenye na obodo nta ha bu Ratchathani Asoke iji zie ugbo na ego Buddha. Ha na-agba ọtụtụ ụlọ nri ndị anaghị eri anụ na Thailand ma nwee ọwa TV ha. Ebe ndị a na-akpọ Asoke dị ọhụrụ ma na-agbanwe agbanwe mgbe nile, na-ahazi ngosi ihe ngosi, nzukọ ọmụmụ, mkparịta ụka na Izu asatọ na-agbapụ maka ndị mpụga.
Òtù ndị agbụrụ na-arụrịta ụka n'ihi na o siri ike na-agbaso na ịkpa ókè agbụrụ, usoro ndụ siri ike na mkpesa na-emeghe nke ike ọchịchị, na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu. Ná mmalite, ìgwè ahụ ekwughị ihe ọ bụla Buddha na ụlọ nsọ ya dị ka ọ chọrọ iji mesie ozizi ndị ahụ ike, ọ bụghị ihe oyiyi. Nke a mere ka ebubo na òtù ahụ abụghị Buddha. Kemgbe 2005, ha etinyewo ihe oyiyi Buddha n'ụlọ nsọ ha [Foto dị n'akụkụ aka nri] ma ọ bụghị n'ihu ụlọ ka e fee ya. Na 1975, a manyere Bodhiraksa ịhapụ ụlọ nzukọ sangha obodo (mahatherasamakhom), a na-ewerekwa otu òtù òtù Asokeji dị ka "ndị a na-akwụ ụgwọ." Ndị mọnk na ndị nọn na-alụso ikpe ikpe n'ụlọikpe na mbụ 1990s mgbe a boro ha ebubo na ha bụ "ndị jụrụ okwukwe." N'ime ya, ndị òtù Soke na-arụ ụka maka ịkwado ụmụ nwanyị dika ndị nọnzi iri, mara dị ka sikkhamats na otu. (Heikkilä-Horn 2015) N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị Asoke etinyewo aka na ngosipụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'akụkụ nke ndị mmadụ Alliance for Democracy (PAD) ma ọ bụ "uwe elu edo edo."
Ndi otu ndi otu ndi mmadu na-etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba Thai na njedebe nke 1990s site n'inyere Sino-Thai telecom na Thaksin Shinawatra na ndi otu ndi ochichi ndi ochichi, Thai Rak Thai (Thais n'anya Thais). Dika Prime Minista Thaksin Shinawatra kwadoro otutu ndi mmadu Asoke, o gara n'otu n'ime obodo Sundayke na Sisaket na July 2005. Isi-General Chamlong Srimuang (dịka onye isi nke òtù Asoke) kwadoro Thaksin n'oge niile ọ na-arụ ụka. Nlepu mbụ a na-ahụ anya n'etiti abụọ ahụ bịara na August 2005, mgbe a na-edepụta ụlọ ahịa biya Bekee na ngwaahịa ahịa. Ndị Chamdi na ndị na-eso ụzọ Bodhiraksa mere ihe ngosi megide nchịkọta ihe gbasara omume ọma: ịṅụ mmanya ekwesịghị ịkwado ya ka ọ ghara imegide Buddhist Precepts (sila).
Nkwụsị ikpeazụ ahụ bịara na Jenụwarị 2006 mgbe Thaksin rere ụlọ ọrụ telivishọn ya na Singapore. Mgbe nke ahụ gasịrị, Chamlong sonyere ntakiri, ndi ndu ndi agha Thaksin di ugbua, ndi Sino-Thai na ndi oru mgbasa ozi Sondhi Limthongkul, onye bu onye na-akwado Thaksin. Otu n'ime ihe ndị mbụ na-egosi na ndị na-eguzogide ndị mmadụ bụ nzukọ ndị agha Thaksin na Sanam Luang, otu ogige dị na obodo Bangkok, na February 26, 2006 [Image na nri]. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị mọnk na ndị na-ezukọ na Mọke sonyeere ihe ngosi ahụ na narị otu narị ndị agha Asoke. Ugbua ndi mmadu ndi mmadu na-akpo ndi oru mgbasa ozi dika "Dharma Army" (gongthub dharm), nke mere ka ndi oru nta akuko si mba di iche iche nwee obi uto. Ndị ngosi ahụ tụrụ egwu na ha ga-ama ụlọikwuu na Sanam Luang ruo mgbe Thaksin kwụsịrị.
Thaksin gbara arụkwaghịm n'April 4, 2006 n'ihi "nkwuba si n'obí eze." Ndị Asoke juru ngwongwo ha iji laghachi n'obodo Asoke. Ka osinadị, Thaksin lọghachiri na June ka ọ nọrọ n'isi ụbọchị iri isii nke ọchịchị Eze Bhumipol, na-akọwa na ọ bụ naanị "ezumike" na ndọrọndọrọ ọchịchị. Ndi agha tupuru Thaksin na Septemba 2006 mgbe ọ nọ na mba ofesi, ebe o kpebiri ịnọ nwa oge. Nchịkwa ndị agha ahụ mere ka mmepe ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Thai laghachi n'oge ọchịchịrị nke ọchịchị aka ike ndị agha.
Ndi mmadu ndi mmadu ndi mmadu na-abanye n'ememe ndia bu ndi ozo n'ile nri, na-eri nri ndi anaghị eri nri nye ndi mmeputa, na-ekesa mmiri mmiri na ihichapu ogige.
Na Mee 2008, “ndị uwe ojii” (PAD) bidoro ịnọdụ ala ọhụrụ megide Prime Minista Samak Sundaravej, bụ onye ji nganga kwupụta na ya bụ "onye ahọpụtara" Thaksin, na August 2008 weghaara ogige gọọmentị. A manyere Samak ka ọ gbaa arụkwaghịm, nwanne nwoke nwanne Thaksin bụ Somchai Wongsawat ka a họpụtara ịbụ Prime Minister. Na ngwụsị Nọvemba 2008, ìgwè mmadụ ahụ nwere Bangkok Suwannabhumi International Airport iji gbochie Prime Minister ịpụ na Bangkok, ebe a na-enyo enyo na isi ya na-eme mmezi pro-Thaksin na Iwu. Prime Minista ahụ gbagara Chiang Mai kama, ọkara nke ndị na-ebugharị ọdụ ụgbọ elu kwagara na ọdụ ụgbọ elu Don Donang na Bangkok iji gbochie ya ịpụ ebe ahụ. Esemokwu ahụ kwụsịrị nwa oge mgbe Courtlọikpe Na-ahụ Maka Iwu na-agbachitere ndị na-achị achị ma machibido Prime Minister na ndị ozi ya niile na ndị omeiwu (MP) na ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka afọ ise na-esote n'ihi nrụrụ aka na ebubo ịzụta votu. Ndị Asoke hapụrụ ọdụ ụgbọ elu na n'okporo ámá wee laghachi n'obodo ha na ebe obibi ha (Heikkilä-Horn 2010).
Asoke laghachiri n'okporo ámá nke Bangkok na Jenụwarị 2011 [Foto dị n'akụkụ aka nri] iji mee mkpesa megide njide nke ụfọdụ ndị na-akwado ha bụ ndị nwere agaghị agafe na mpaghara Cambodian nke ókèala ahụ, na-ekwu na ha ga-enyocha ókèala ala ndị dị n'akụkụ ahụ. Ewere esemokwu a dị ka ịga n'ihu esemokwu banyere ala gbara gburugburu temple Hindu temple Preah Vihear nke dị na Cambodia, bụ nke na-esite na Thailand karịa nke Cambodia n'oge afọ agha na Cambodia.
Ndi Thai Patriots Network haziri nhazi mbu na January 2011, ndi mmadu Asoke sokwa na ihe ngosi ndia. N'ihi na Thai Patriots Network na Palang Dharma jikọtara ya, n'etiti ndị Thai Patriots Network na ndị Asoke. Ụfọdụ n'ime foto ndị mbụ e bipụtara na mgbasa ozi Thai site na ngosipụta ahụ gosipụtara ndị mmadụ na-ejikọtaghị aka na njem ndị Asoke maka Network Thai Patriots Network.
Njikọ a na netwọk Thai Patriots na-egosi otú o siri sie ike ịkọwa ndị òtù Asoke dịka ndị dị otú ahụ. Otu n'ime ndị nọ na foto a na-eji mpako na-agagharị maka Thai Patriots Network bụ onye Asoke sikkhamat, onye weghaara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri atọ gara aga ma ọ dịghị mgbe ọ kwụsịrị njikọ ya na ìgwè Asoke. Ọ ka bi na Santi Asoke ma na-eleta ụlọ nsọ na-enweghị isi. O sonyekwara aka n'òtù okpukpe ndị ọzọ dịka ịhazi nzukọ Buddha nke Nna-ukwu (Suma) Ching Hai nke Bangkok. Ọ nọ n'ọtụtụ ụzọ na-adịghị anọchite anya ndị otu Asoke mana, n'otu oge ahụ, na-eje ozi dị ka ihe atụ nke onye nkịtị (yati tham) na-ejikọtaghị onwe ya na òtù Asoke ma na-esonyere ụfọdụ n'ime ọrụ ya.
A na-akpọ Asoke nọ na-akpọ "Neo-Protest" n'asụsụ Bekee, ma ọ ga-ewebata usoro udo na n'usoro iji mee mkpesa, n'enweghị ihe ike ma ọ bụ okwu rụrụ arụ. Bodhiraksa kwusiri ike na mkpesa ha na Thai Patriots Network, n'eziokwu, gbakwunyere ọha mmadụ onye kwuo uche ya. N'ebe ndi otu ochichi onye mmadu nwere ike ime ihe ndi ozo n'udo iji gwa ndi mmadu banyere otutu okwu banyere ndi mmadu. N'ihi ya, ndị mmadụ nwere ọrụ na ikike ime mkpesa ma ime mkpesa n'udo na n'usoro.
"Neo-Protest" enweghị ike ịkwado nnukwu nkwado. Oge nkwụsị na-emechi-amalite na Jenụwarị ma nọrọ ruo mgbe a ga-eme ntuli aka n'ozuzu na July. Ebumnobi nke Asoke "Neo-Protest" nọgidere na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị mgbagwoju anya na nkwenye nke ịtọhapụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ndị batara Cambodia n'ụzọ iwu na-akwadoghị ka ndị na-eme ihe ike na-achọ iji redraw ndị ala Thai nile, nke ndị ngosi ahụ juru anya naanị ugbu a ghọtara n'ezie ikike colonial banyere 100 afọ gara aga. Akpadoro ihe ndi ozo n'agba ajuju nke "Vote No" nke na agba ndi mmadu ume ka ha ghara itu votu maka onye obula n'ime nhoputa ndi ochichi nke July n'agbanyeghi na ndi ozo bu "ezi mmadu.
Ndị otu Asoke efuola ọtụtụ ndị na-akwado ya n'ihi itinye aka ha na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba Thai (Sanitsuda 2011). A naghị ahụ otu ahụ na ngagharị n'okporo ámá ndị kachasị ọhụrụ a maara dị ka "Bangkok mechiri emechi" na 2014 megide Prime Minista Yingluck Shinawatra, nwanne nwanne Thaksin. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị nwere njikọ na Thai Patriots Network sonyekwara na ngagharị iwe nke 2014, nke mechara duga agha ndị agha megide gọọmentị Yingluck Shinawatra. Otu a enwetakwala ndị nkwado ọhụrụ site na ngagharị iwe ndị a.
Ekachai, Sanitsuda. 2011. "Nzọụkwụ Ọjọọ Site Bodhiraksa." Bangkok Post, 21 January.
Ekachai, Sanitsuda. 1988. "Nwoke Na-anọchi Santi Asoke." Bangkok Post, 22 July.
Essen, Juliana. 2005. Development Right: Santi Asoke Buddhist Reform Movement nke Thailand. Lanham, MD: Akwụkwọ Lexington.
Heikkilä-Horn, Marja-Leena. 2015. "Okpukpe Nwanyi Okpukpe na Ndị Nwanyi na Group Buddhist Asoke na Thailand," Pp. 191-203 na "Ịnabata Equality Gender Equality: Ọdịnihu nke Ụwa Ụwa." Research in Political Sociology, Vol. 23, nke Eunice Rodriguez na Barbara Wejnert dere. Bingley, United Kingdom: Emerald Group Publishing.
Heikkilä-Horn, Marja-Leena. 2010. "Santi Asoke Buddha na Ọrụ nke Bangkok International Airport." Nnyocha Austrian Journal of South-East Asia Studies 3: 31-47 .
Heikkilä-Horn, Marja-Leena. 2002. "Obere Dị Mma N'etiti Obodo Gburugburu." Pp. 25-63 na Insight n'ime Santi Asoke, edeziri site na ML Heikkilä-Horn na Rassamee Krisanamis. Bangkok: Fah Aphai.
Heikkilä-Horn, Marja-Leena. 1996. Santi Asoke Buddhism na okwu Thai State. Turku: Ubo Akademi University Press.
Nyanatiloka, Ven. 2004. Buddhist Dictionary: Ntuziaka nke Usoro Buddha Okwu na nkuzi. Chiang Mai: Silkworm Books.
Image #1: Foto nke Bohdiraksa na Bangkok Post na Jenụwarị 2011.
Image # 2: Foto nke Sikkhamats 'kutis. Foto e sere ma jiri ikike nke Marja-Leena Heikkilä-Horn were ya.
Foto #3: Onye mọnk ọhụrụ na Lanna Asoke. Foto nke e jiri ya mee ihe na ikikere nke Marja-Leena Heikkilä-Horn.
Foto #4: Bodhiraksa (nke a na-akpọ Samana Pho Than n'ime ìgwè) na-eje ije na ngosipụta ya na ndị mọnk ya. Foto nke e jiri ya mee ihe na ikikere nke Marja-Leena Heikkilä-Horn.
Foto #5: Asoke Sikkhamats (ndị nọn) na-eme ebere na Sisa Asoke. Foto nke e jiri ya mee ihe na ikikere nke Marja-Leena Heikkilä-Horn.
Image #6: Foto Buddha na obodo nzuko. Obodo nwere foto Buddha na ụlọ nsọ ha nanị kemgbe ufọt ufọt 2000s.
Foto #7: Dhamma Army demonstrators na 2006. Foto nke e jiri ya mee ihe na ikikere nke Marja-Leena Heikkilä-Horn.
Foto #: Bodhiraksa na-ekwu okwu na 'Neo-Protest' na Bangkok na 2011. E sere foto ahụ ma jiri ikike Marja-Leena Heikkilä-Horn were ya. Foto e sere ma jiri ikike nke Marja-Leena Heikkilä-Horn were ya.